Achọpụtara Ihe 5 Dị Mkpa nke SEO na Frog Frog | Martech Zone
Monday, May 6, 2013 Fraịde, Ọgọstụ 30, 2013 Douglas Karr
Cra nwetụla mgbe ị gbara saịtị gị? Ọ bụ usoro dị mma iji dozie ụfọdụ nsogbu dị egwu na saịtị gị nke ị nwere ike ịchọtaghị. Ezigbo ndị enyi na Atụmatụ saịtị gwara anyị banyere Na-eti mkpu Frog's SEO Spider. Ọ bụ ihe dị mfe crawler nke enwere n'efu na njedebe nke 500 peeji dị n'ime… zuru oke maka ọtụtụ weebụsaịtị. Ọ bụrụ na ịchọrọ karịa, zụta akwụkwọ ikike annual 99 kwa afọ!
Enwere m ekele maka ngwa ngwa m nwere ike i scanomi saịtị ma hụ ihe ise okwu 5 kachasị mkpa njin Ọchụchọ Inyocha:
404 Achọtaghị Okwu na njikọ dị n'ime, njikọ mpụga na onyonyo. Icheta ihe oyiyi ndị a na-ahụghị nwere ike ime ka saịtị gị belata. Ighachite njikọ dị n'ime ya nwere ike imebi ndị ọbịa gị.
Akpa Akpa ndị kasị dị oké egwu mmewere nke gị na peeji nke, ị kachasị ha na Keywords?
Ihe Meta egosiputara dika nkowa nke ibe gi n’ime akwukwo nsonaazụ igwe (SERPs). Site na imeziwanye nkọwapụta meta, ị nwere ike ị mewanye usoro ịpị pịa na peeji gị.
Isi okwu - H1 bụ mkpado isiokwu na ị kwesịrị inwe 1 etiti isiokwu kwa ibe. Y’oburu na inwetakwu, ichoro igbanwe ha na isi okwu ndi ozo. Iti mkpu Frog ga-egosi gị mkpado H2 gị… ma ịnwe karịa ndị ahụ n'otu peeji dị mma. Isi okwu niile kwesiri ibu okwu bara uru ma dikwa mkpa na isiokwu peeji.
Ihe onyonyo Alt Tags nyere aka nyocha ihe nchọta na ịkọwapụta ihe onyonyo gị nke ọma ma gosipụta ederede ọzọ maka ndị na - agụ ihuenyo na ngwa ndị na - egbochi ederede (dịka mgbe ị na - etinye ọdịnaya blọgụ gị na ozi ịntanetị). Nyochaa onyonyo gị ma mejupụta nkpado ederede ọzọ na mkpụrụedemede isiokwu, ederede dị mkpa.
Akụkụ ọzọ dị ukwuu nke Na-eti mkpu Frog SEO Ududo bụ Ndepụta Ọnọdụ. Enwere m ike ịnweta mbupụ nke ibe asọmpi site na ngwa ọrụ Semrush, tinye ya na faịlụ ederede, ma webata ya na Scrog Frog ka ị gawa ma weghachite nyocha nke ihe niile nke ibe ogo ndị asọmpi!
Ọ bụrụ n’ịchọrọ igwu ntakịrị n’ime njikarịcha njin peeji nke peeji gị, anyị nwere isiokwu ndị a:
Etu esi achota akwukwo maka Chọọ mpaghara
Tags: nsịcrawler na peeji nkeiti mkpusearch engine njikarịchasemrushonye na -akpụ akpụseo ududoseo ngwaọrụcrawler na weebụ
Mee 6, 2013 na 3: 33 PM
Nke a bụ nnukwu ngwaọrụ. Ọsọ ọsọ, dị irè ma ugbu a ọ bụrụ na ọ dị naanị ya na WordPress wee nwee ike idezi njikọ na nkụnye ndị eji isi mee, wdg. Nke ahụ ga-akarị ịbụ eziokwu. Ajuju m na ajuju bu ma wedata menus na wordpress dika ndia
Mee 6, 2013 na 4: 22 PM
Mee 7, 2013 na 4: 34 AM
Daalụ maka ịkpọtụrụ Douglas.
Ebumnuche ọ bụla ị jiri 'nofollow' na njikọ mpụga niile sitere na saịtị ahụ?
Mee 7, 2013 na 8: 32 AM
Eeh, nihi na anyi nwere otutu njiko oku n’edemede obula.
Mee 13, 2013 na 7: 57 AM
Ndo, ejighi n'aka na ezi uche dị na ya.
Gini mere ị ga - eji 'mechie' ihe ị tụkwasịrị obi ma jiri ya kpọrọ ihe?
Mee 10, 2013 na 11: 12 AM
Nke a dị oke egwu maka “Image Alt Tags” ihe… Daalụ Douglas!
Mee 28, 2013 na 4: 08 AM
Daalụ maka nkenke nnyocha nke Iti mkpu Frog!
Agbanyeghị na m na-eji ngwa ọrụ ọzọ iji rụọ ọrụ njikarịcha na peeji, ọ bụ ihe na-akpali mmasị ilele ụzọ ndị ọzọ anya. Onye sitere na ngwa agha m bụ WebSite Auditor, m na-ejikwa ya iji chọta oyiri, njehie koodu na nyocha nke ibe na ibe. N'ezie, akụrụngwa dị na peeji bụ ihe dị mkpa, ọkachasị ugbu a mgbe ihe ndị eji eme ihe ghọrọ ihe dị oke egwu maka SEO.
Mee 28, 2013 na 8: 57 AM
Anyị na-ejikwa Auditor Weebụsaịtị, @emmettferguson: disqus. Nnukwu ngwá ọrụ - anyị ga-eme ọkwa na ya.
Nov 6, 2013 na 3:33 AM
M na-eji WebSite Auditor kwa na ihe masịrị m banyere ya bụ na ọ bụghị na pricy ma e jiri ya tụnyere Scrog Frog na 99 Pound kwa afọ
Feb 6, 2015 n’elekere 11:34 nke abali
Kwa dollar ị tinyere na Screamingfrog nke ọma. Naanị $ 100 ị nwetara ebe a ọtụtụ akụkọ na data sitere na ngwaọrụ ndị ọzọ dị oke ọnụ ma karịa dị ka ndenye aha kwa ọnwa.